पुडासैनीका अनुसार भिडियोमा दुई जना सञ्चारकर्मी र एक महिलाका कारण आफूले आ*त्मह*त्या गर्नु पर्यो ? को हुन् ती २ जना – " कञ्चनजंगा News "
पुडासैनीका अनुसार भिडियोमा दुई जना सञ्चारकर्मी र एक महिलाका कारण आफूले आ*त्मह*त्या गर्नु पर्यो ? को हुन् ती २ जना
No Comments on पुडासैनीका अनुसार भिडियोमा दुई जना सञ्चारकर्मी र एक महिलाका कारण आफूले आ*त्मह*त्या गर्नु पर्यो ? को हुन् ती २ जना
चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृ८त्यु आ८त्मह८त्या दुरुत्साहनबाट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । मृ८त्युअघि उनले रेकर्ड गरेको भिडियोमा केही मानिसका कारण आफू आ८त्मह८त्या गर्न लागेको उल्लेख भएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार उनको मोबाइलमा रेकर्ड गरिएका दुई वटा करीब ८ मिनेट र ३ मिनेटका भिडियो फेला परेको छ । सोही आधारमा अनुसन्धान भइरहेको मल्लले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निज पुडासैनीको साथबाट डि८प्रेशनको औष८धिसमेत फेला परेको छ । विगत केही समययता उनले औष८धिसमेत प्रयोग गर्दै आएको देखिएको छ । भिडियो हेरेका नुवाकोट जिल्ला वेलकोटगढी नगरपालिका–३ का वडा सदस्य एवं मृत८कका छिमेकी दीपक पुडासैनीका अनुसार भिडियोमा दुई जना सञ्चारकर्मी र एक महिलाका कारण आफूले आ८त्मह८त्या गर्न लागेको जनाइएको छ ।
पुडासैनीले भिडियोमा म८र्नुको कारण जनाउँदै श्रीमतीलाई आफ्नो सम्पत्तिका बारेमा जानकारी दिएर परिवारसँग मिलेर बस्न आग्रह गरेको बताए । सोही भिडियोका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पुडासैनीको भनाइ छ ।
भिडियो पाउनुअघि ह८त्या गरिएको आशङ्का गरिएको भए पनि भिडियो हेरेपछि आ८त्मह८त्याका लागि दुरुत्साहन गरेको देखिएसँगै आफूहरुले श८व बुझेर काठमाडौँ लगेको उनले बताए । आज अ८न्त्येष्टिसँगै कानूनी परामर्श गरेर अघि बढ्ने मृ८तकका दाजुसमेत पर्ने पुडासैनीले बताए ।
घ८टनाको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको भन्दै प्रहरीले विस्तृत विवरण खुलाउन चाहेको छैन । अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ले प्रहरीप्रमुख मल्लले जानकारी दिए । पुडासैनीको श८व राति काठमाडौँ लगिएको हो । उनी सोमबार चितवनको नारायणगढस्थित होटेल कङ्गारुमा झु८न्डिएको अवस्थामा मृ८त भेटिएका थिए । दुई महीनाअघि सम्म न्युज २४ मा कार्यरत पत्रकार पुडासैनी केही दिनदेखि माउन्टेन टेलिभिजनका कार्यरत थिए । यो समाचार हिमाल पोष्टवाट लिइएको हो ।
← सुष्मा स्वराजको प्रेमकथाः ‘स्वराज’ श्रीमानको नामलाई थर बनाइन्, आखिर के थियो उनको थर ? → चो*री गर्न गएको एक युवा कोठामा ब्राण्डेड रक्सीका बोत्तल पाएपछि मख्ख